Hebel Cali • Qorraalo
Ganacsiyada maalmahan ugu badan ee Somalida dhexdeeda ka jira waa ka ganacsiga abaabulka guurka.
Maadaama xiriirka iyo kulanka wiilasha iyo gabdhaha bulshada dhexdeeda looga arko wax “xaaraan” ah oo dhaqankasuna soo xoogeysanayey afartankii sanno ee u dambeeyey dhaqankaas oo laga soo dheehday bulshooyinka Carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka.
Taa sababteeda waxaa abuurmay jiil dhalinyaro ah oo aanan fursad u heli karin la kulanka iyo la haasawga jinsiga kale. Waxaa baahay kalinimada iyo kala soocnaanta ragga iyo haweenka.
Waxaa ka dhashay dhaqankaa hilow xoogan ay isku qabaan laba dhinac wiilasha iyo gabdhaha la kala xayiray waxaana adkaaday in ay kulmaan, sheekaystaan, isna bartaan si ay jaceyl u sameeyaan marka dambena aqal u dhisaan.
Waxaa halkaas fursad ka arkay qolooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaa wadaada wahaabiga oo iyagu ah kuwa abuuray kala xeyrankan labada jinsi ee labka iyo dhediga Soomaaliyeed, waxaa kaloo arinkan u soo tafa-xeytay ka faa’iideysiga baahidan la abuuray ee jaceylka bulshada Somaliyeed dhexdeeda lagu beeray.
Waxaa dhawanahanba soo badanayey ka ganacsiga guurka iyada oo loo balan qaadayo nafahan kaliyoobay wehel iyo jaceyl waara oo ay ku helayaan haddii ay bixiyaan qidmad yar.
Waa nasiib darro wax ay ahayd in qofku uu ku kasban karo dabeecad, dhaqan wanaag, naf hurnimo iyo daacadnimo maanta loo rogay iib iyo fursad sameyn lacag dhaqso ah.
Kuwa hor boodaya ka ganacsiga jaceylka waa qalima shubato u arka nafaha kaliyoobay ee Somalida in ay yihiin fursad ganacsi iyo il laga helo lacag fudud.